Akwụkwọ Elena Ferrante: nnukwu ahịa pseudonym | Akwụkwọ akụkọ
Akwụkwọ Elena Ferrante
Okporo ámá nke Naples
Elena Ferrante bụ pseudonym nke onye odee Ịtali bụ onye nọworo na-egbukepụ egbukepụ n'akụkọ ihe mere eme n'ụwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ. N'agbanyeghị na ọ malitere ọrụ edemede ya na 90s, ọrụ ya malitere na 2012 mgbe o bipụtasịrị. Akwa enyi, akwụkwọ akụkọ nke tetralogy ji malite Ndị enyi abụọ. Na 2018, mgbe ihe ịga nke ọma nke saga gasịrị, HBO mere ya maka TV na aha nke akwụkwọ mbụ na ruo ugbu a 2 oge agbasawo.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 na gburugburu ebe obibi akwụkwọ, odee nwere katalọgụ nke akwụkwọ akụkọ itoolu, akụkọ ụmụaka na edemede. Aha amaghị aha ya egbochighị ya imeri ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ ma n'Ịtali ma n'ụwa ndị ọzọ. Akwụkwọ ọhụrụ ya, Lyinggha ndụ ndị okenye (2020), bụ nke edepụtara ya Time dị ka otu n'ime akwụkwọ 100 kacha mma nke afọ.
1 Akwụkwọ Elena Ferrante
1.1 L'amore iwe (1992)
1.2 Ọchịchịrị figlia (2006)
1.4 Akụkọ nke Perduta Bambina (2014)
2 Banyere onye edemede, Elena Ferrante
2.1 Anita Raja, "onye edemede" n'azụ Elena Ferrante
L'amore ewe iwe (1992)
Ọ bụ akwụkwọ mbụ nke onye edemede Italy, nke ọ raara nye nne ya. E bipụtara ya na Spain na aha ya Anhụnanya iwe (1996), nke Juana Bignozzi tụgharịrị ya. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ e debere na Naples n'etiti narị afọ nke XNUMX, nwere isi 26 ma akọwara ya na onye mbụ. Na ibe ya mmekọrịta dị n'etiti nne na nwa ya nwanyị nwere njikọ - Amalia na Delia -.
Na May 23, a hụrụ ozu ka ọ na-ese n'elu oke osimiri, ka a chọpụtachara ahụ ya, a kwadoro na ọ bụ Amalia. Akụkọ ọjọọ ahụ ruru Delia ntị kpọmkwem n'ụbọchị ọmụmụ ya. Na nne ya nwụrụ bụ ihe ọ na-atụghị anya ya ịmara kpọmkwem ụbọchị ahụ.
Mgbe ọdachi ahụ gasịrị, Delia kpebiri ịlaghachi na obodo ya Naples iji nyochaa ihe omume ahụ, ebe ọ tụrụ ya n'anya na Amalia na-eyi naanị bra. Mgbe ọ bịarutere n'obodo ahụ, ọ dịghịrị ya mfe ihu ihe ndị gara aga nke ọ gbalịsiri ike ileghara anya, mgbagwoju anya nwata ahụ nke o kpebiri igbochi ya n'uche.
Ka ọ na-ekpughe ihe omimi ndị gbara ajọ omume ahụ gburugburu, eziokwu ndị ha chepụtara na-apụta ìhè gburugburu gị, ndụ gị na àgwà gị, rawness nke ga-eme ka ị hụ eziokwu ọhụrụ.
Nwa nwanyi (2006)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke atọ nke literata. Celia Filipetto sụgharịrị ya wee bipụta ya n'asụsụ Spanish nwere aha ya Nwa nwanyi (2011). Ọ bụ akụkọ a kọrọ na mbụ site n'aka onye na-akwado ya bụ Leda, na onye isi okwu ya bu ibu nne. Edebere nkata ahụ na Naples wee wepụta ihe karịrị isiakwụkwọ 25 dị mkpirikpi.
Leda bụ nwanyị dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 50, onye gbara alụkwaghịm ma nwee ụmụ nwanyị abụọ: Bianca na Marta. O bi na Florence, na mgbakwunye na ilekọta ụmụ agbọghọ ya, ọ na-arụ ọrụ dị ka onye nkuzi akwụkwọ Bekee. Ndụ gị na-eme ihe na-agbanwe na mberede mgbe ụmụ ya kpebiri iso nna ha kwaga Canada.
Akpaokwu nke Elena Ferrante
Nwaanyị, n'ebe dị anya site n'inwe agụụ, ọ na-ahụ onwe ya free ime ihe ị chọrọ, yabụ na-aga ezumike na obodo ya Naples.
Mgbe ị na-ezu ike n'akụkụ osimiri isoro ezinaụlọ dị iche iche kerịta ihe, nụ, n'amaghị ama, ya gara aga. N'oge ahụ, wakporo site n'amaghị ama na-abịarute na-echeta ya, mee mkpebi siri ike ma dị ize ndụ.
Ada gbara ọchịchịrị...
Enyi na-egbuke egbuke (2011)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ mbụ nke saga Ndị enyi abụọ. E bipụtara nsụgharị Italian ya na 2011. Otu afọ ka e mesịrị Celia Filipetto sụgharịrị ya n'asụsụ Spanish ma gosipụta ya n'okpuru aha: Akwa enyi (2012). A na-akọ atụmatụ ahụ na onye mbụ ma na-eme na Naples na narị afọ gara aga. N'oge a, ọbụbụenyi bụ ihe ndabere nke akụkọ ahụ, nke a nwekwara ndị ntorobịa abụọ dị ka ndị na-eme ihe nkiri: Lenù na Lila.
Lenù na Lila ejirila oge ha bụ nwata na ntorobịa n'obodo ya, ebe dara ogbenye nke ukwuu na mpụga Naples. Ụmụ agbọghọ ahụ tolitere ọnụ na mmekọrịta ha agbanweela n'etiti ọbụbụenyi na asọmpi nke oge ahụ. Ha abụọ nwere nrọ ha doro anya, ha kwenyesiri ike na ha ga-emeri onwe ha wee pụọ n'ebe ahụ gbara ọchịchịrị. Iji mezuo ebumnuche gị, agụmakwụkwọ ga-abụ isi ihe.
Enyi mara mma (abụọ ...
Akụkọ nke perduta bambina (2014)
Nwata furu efu (2014) — aha na Spanish—bụ ọrụ na-akwụsị tetralogy Ndị enyi abụọ. Akụkọ ahụ mere na narị afọ nke XNUMX na Naples ma gosipụta Lenù na Lila n'oge ha toro. Ha abụọ ewerela ụzọ dị iche iche, nke mere ka ha kewapụ onwe ha, mana akụkọ ọhụrụ nke Lenù ga-ejikọta ha ọzọ. Akụkọ ahụ na-aga site n'oge ugbu a nke ụmụ nwanyị abụọ a ma na-atụgharịghachi ndụ ha.
Lenù ghọrọ onye edemede a ma ama, kwaga Florence, lụọ di ma mụọ ụmụ. Otú ọ dị, alụmdi na nwunye ha dara. N'aka nke ya, Lila nwere akara aka dị iche, ọ naghị ahapụ obodo ya ma na-agbasi mbọ ike megide enweghị ahaghị nhata na-eme ebe ahụ. Lenù kpebiri ịmalite akwụkwọ ọhụrụ na isiokwu ahụ mere ka ọ laghachi Naples, nke ga-enye ya ohere izute enyi ya ọzọ..
Nwatakịrị nwanyị ahụ furu efu (abụọ ...
Mgbe ihe ịga nke ọma nke saga Ndị enyi abụọ, Elena Ferrante gosipụtara Lyinggha ndụ ndị okenye (2020). Ọ bụ akụkọ nwere Giovanna dị ka onye na-akwado ya na nke na-ewere ọnọdụ na Naples na 90s.. Akwụkwọ akụkọ a nwere àgwà Ferrante, bụ́ onye n'ajụjụ ọnụ a gbara ajụjụ ọnụ kwuru, sị: “Mgbe m bụ nwata, abụ m onye ụgha. N'ihe dị ka afọ 14, mgbe ọtụtụ mmechuihu gasịrị, ekpebiri m itolite. "
Giovanna bụ nwa agbọghọ dị afọ 12 que bụ nke Neapolitan bourgeoisie. Otu ụbọchị ọ nụrụ n’ọnụ nna ya -Enweghị ya maara- na ọ bụ nwa agbọghọ jọrọ njọ, dị ka nwanne nne ya bụ Vittoria. N'ịbụ onye ihe ndị ọ nụrụ kpaliri mmasị ya na mgbagwoju anya, o nwere ike ịhụ otú ndị toro eto si bụrụ ndị ihu abụọ na ndị ụgha. N'ịbụ onye ọchịchọ ịmata ihe banyere, o kpebiri ịchọ nwanyị a, ka o wee jiri anya ya hụ ihe nna ya na-ekwu banyere ya.
Lyinggha ndụ nke ...
Banyere onye edemede, Elena Ferrante
N'ihi amaghị aha ya, nkọwa akụkọ ndụ ole na ole ka amaara gbasara onye edemede Italy. Ọtụtụ ndị na-ekwu na a mụrụ ya na Naples na 1946 nakwa na ọ bi ugbu a na Turin. N'ime oge ọrụ ya niile, a mara ya naanị site na ajụjụ ọnụ ole na ole o nyere site na ozi-e.
Anita Raja, "onye edemede" n'azụ Elena Ferrante
Na 2016, otu nwanyị aha ya bụ Anita Raja "gosipụtara" site na profaịlụ Twitter na ya bụ onye na-akpata pseudonym. Site na ozi dị iche iche, onye a kwupụtara na ya bụ "onye edemede" wee rịọ ka a kwanyere nzuzo ya, wee kpochapụ akaụntụ ahụ. Agbanyeghị, obere oge ka e mesịrị Tommaso Debenedetti - nke a ma ama maka ịgbasa ajụjụ ọnụ adịgboroja na ndị a ma ama - kwuru tweet ahụ, si otú a na-eme ka enwekwu obi abụọ.
Debenedetti mere ka obi sie ya ike na ya na Raja zutere, na o nyere ya ozi ahụ. N'agbanyeghị ọnọdụ dị egwu nke onye edemede - onye na-akpọ onwe ya "Onye mmeri Ịtali nke Ụgha" - ụfọdụ ndị nta akụkọ kwadoro ozizi ahụ. Iji mee nke a, ha jụrụ ajụjụ banyere ebe a na-edebe ego nwebiisinka ma tinye ya na akaụntụ Anita Raja, nke nwere ike igosi na ọ bụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Akwụkwọ Elena Ferrante
Christina Rossetti. Ememe ncheta ọnwụ ya. Egwu
Nhọrọ m nke akwụkwọ nke afọ. Nlebanya